VPN ဆိုတာဘာလဲ။ သင်တစ် ဦး ကိုဘယ်လိုရွေးသလဲ။ | Martech Zone
နှစ်များစွာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ရုံးခန်းရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ပြီးအောင်မြင်မှုရစေသည်၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာများအားဗဟိုနေရာတစ်ခုသို့ပို့ပေးသည်။
အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များသည်ရုံးသို့မလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်စာရင်းကိုလျှော့ချပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူပိုများလာပြီးအချိန်များစွာကုန်ဆုံးနေခဲ့သည်။ ဒါကအကုန်အကျများတယ်။ ရုံးခန်းဟာပေါင်နှံခြင်းထက်အများကြီးပိုစျေးကြီးတယ်။
လေယာဉ်ကွင်း၊ ဟိုတယ်၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတွေနဲ့အတူငါအလုပ်လုပ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ဘူတာရုံကိုတောင်အပြင်ထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ပိတ်ထားသည့်ကျန်းမာသောကွန်ယက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များနှင့်မတူပါ။ အမှန်မှာထိုမျှဝေထားသောကွန်ယက်အများစုသည် snooping အတွက်အတော်လေးပွင့်လင်းသည်။ ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်လုပ်ကိုင်နေသည့်အထောက်အထားများနှင့်အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရေးသည်အများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပါ။ ဒါဘယ်မှာလဲ Virtual ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက် ကစားသို့ကြွလာ။
A VPN ကိုဒါမှမဟုတ် virtual private network, သင်၏ကိရိယာနှင့်အင်တာနက်အကြားလုံခြုံသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အွန်လိုင်း traffic ကို snooping, interference, နှင့် censorship မှကာကွယ်ရန် VPN များကိုအသုံးပြုသည်။ VPN များသည် proxy တစ်ခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သင့်တည်နေရာကိုဖုံးကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်နှင့်သင်လိုချင်သည့်နေရာမှဝဘ်ဆိုက်အမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။
VPN တစ်ခု၏အသေးစိတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုကြည့်ရှုရန် Surfshark ၏အပြန်အလှန်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကိုလည်းသင်စစ်ဆေးချင်လိမ့်မည်။ VPN ဆိုတာဘာလဲ?
သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအားလုံးကိုအခြားနေရာများမှတစ်ဆင့်စာဝှက်ပြီး tunneled လုပ်ရန်သေချာစေခြင်းအားဖြင့်၊ Virtual Private Network:
သင်၏ IP နှင့်တည်နေရာကိုဖျောက်ထားပါ - သင်၏ IP address နှင့်တည်နေရာကို destination sites များနှင့် hacker များထံမှဖုံးကွယ်ရန် VPN တစ်ခုကိုသုံးပါ။
သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုစာဝှက်ပါ - ကောင်းမွန်သော VPN များသည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ခိုင်မာသော 256-bit encryption ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏စကားဝှက်များ၊ အီးမေးလ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဘဏ်ဒေတာနှင့်အခြားအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလေဆိပ်နှင့်ကဖေးများလို Wi-Fi ဟော့စပေါ့များမှကြည့်ရှုပါ။
အကြောင်းအရာများကိုဘယ်နေရာမှမဆိုကြည့်ပါ - သင်၏ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များအားလုံးကိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုမီးတောက်ပနေသော HD ဖြင့်ပြသပါ။ bandwidth ကန့်သတ်ချက်မရှိသောအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်ကိုအကောင်းဆုံးထားပြီးဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအရာအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ဆင်ဆာလုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်ပါ - ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ Skype၊ Youtube နှင့်ဂျီမေးလ်ကဲ့သို့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလွယ်ကူစွာသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ သင်လိုချင်တာကိုယူပါ၊ သင့်နိုင်ငံမှာမရနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်တောင်မှ၊ ၀ င်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ကျောင်းဒါမှမဟုတ်ရုံးကွန်ယက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တောင်ရှာပါ။
စောင့်ကြည့်မှုမ - အစိုးရများ၊ ကွန်ယက်ကြီးကြပ်သူများနှင့်သင်၏ ISP များမှဖမ်းဆီးခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။
geolocated ပစ်မှတ်မရှိပါ - သင်၏ IP address နှင့်တည်နေရာကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် ExpressVPN သည်ဆိုဒ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကိုတောင်းခံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများပြသရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ အားလပ်ရက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအမှာစာအတွက်ငွေပိုတောင်းတာကိုရှောင်ပါ။
VPN သည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်တည်နေရာကိုဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအမည်မသိ visitors ည့်သည်များသင့်လျော်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရရှိစေရန်စစ်ဆေးရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်းပေးသည်။
Virtual Private Network ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတူညီစွာဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရွေးချယ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ရာနှင့်ချီသောမတူညီသောပံ့ပိုးသူများနှင့်အတူ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဆိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုများအကြားမှန်ကန်သောမျှတမှုကိုရရှိခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းများကိုဆိုလိုသည်။
ပထဝီအနေအထား VPN ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ကိုသင်ဆက်သွယ်သောအခါ၊ ဝေးလံသောဆာဗာမှသင့်ကွန်ပျူတာသို့သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းမှလာသည့်ဒေတာ packets အားလုံးကိုသင်၏ VPN ပံ့ပိုးသူ၏ဆာဗာများမှဖြတ်သန်းရမည်။ အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆာဗာများရှိကွန်ပျူတာများအတွက် VPN တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ VPN ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမှုနှင့်ပတ်သက်သောကတိများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းပံ့ပိုးသူများ၏အခြေခံအဆောက်အအုံသည်အဆင့်မြင့်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
bandwidth - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်အတွင်းပိုင်း VPN တစ်ခုကိုပေးသည်။ သူတို့မှာ bandwidth များများစားစားရှိရင်ဒါကကောင်းပါတယ်။ သို့သော်စွမ်းရည်မရှိသော VPN တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသူအားလုံးကိုတွားသွားနှေးစေလိမ့်မည်။
မိုဘိုင်းအထောက်အပံ့ - VPN ဖွဲ့စည်းမှုများသည်နာကျင်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းခေတ်သစ်လည်ပတ်မှုစနစ်များတွင် VPN စွမ်းရည်များပါ ၀ င်သည်။ Desktop နှင့် mobile စွမ်းရည်ရှိသော VPN service တစ်ခုနှင့်သင်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းသေချာပါစေ။
လျှို့ဝှက်ချက်များ - သင်၏ပံ့ပိုးသူသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း (သို့) မျှဝေခြင်းမရှိခြင်းနှင့်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံခြင်းမရှိကြောင်းသင်အမြဲသိထားသင့်သည်။ အကယ်၍ အကြွင်းမဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ဂျာနယ်များလုံးဝမရှိသောကတိသည်သေချာပေါက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်အရှုပ်တော်ပုံများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိရုံးချုပ်မရှိသောပံ့ပိုးသူထံမှ PC အတွက် VPN ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
အရှိန် - ထိပ်တန်း VPN များသည်သင်၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ သို့သော်အရည်အသွေးမြင့်သောဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း၊ ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပိုမိုလေ့လာရန်အပါအဝင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည် နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများ။ ကြော်ငြာတွေကိုမယုံနဲ့ အမြဲတမ်းအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစစ်ဆေးနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုလုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုအတွက် VPN ဝန်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်သည့်အခါတစ်နေ့တာ၏အချိန်အမျိုးမျိုးတွင်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ပါ။
စျေးနှုန်း - အကောင်းဆုံး VPN ကိုသုံးရန်သင်ငွေအနည်းငယ်ဖြုန်းရန်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းနေ့စဉ်အသုံးပြုလျှင်၎င်းတို့သည်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။ Windows နှင့် Mac ကွန်ပျူတာများအတွက်အခမဲ့ VPN များသည်များသောအားဖြင့်တင်းကျပ်သောအသွားအလာသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ သတင်းကောင်းမှာ PC များအတွက် VPN ပံ့ပိုးပေးသူအများစုကသင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်၊ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းလျှင်သင်ပြန်အမ်းငွေရလိမ့်မည်။
အလွန်ဆင်တူသောကမ်းလှမ်းမှုများစွာကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖောက်သည်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ VPN ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းသည်လားဆိုးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာအချို့သည်ရက်သတ္တပတ်များစွာနှင့်လပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးမှသာပေါ်လွင်လာသည်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကိုရှာဖွေပြီးဝေဖန်ပါ။ ၁၀၀% ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုမရှိပါ။ သို့သော်သင့်တော်သောဝန်ဆောင်မှုကို VPN များရှိသောကြောင့်သာရွေးချယ်သင့်ပါသည် အနာဂတ်နည်းပညာ.
ငါရွေးခဲ့တယ် ExpressVPN ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံပေါင်း ၉၄ ခုမှာဆာဗာတည်နေရာ ၁၆၀ ရှိပြီး ၂၅၆-bit encryption ကိုသုံးထားတယ်။ သင့်တည်နေရာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် app တွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ် Mac ကိုဖွင့်သည့်အခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းပေါ်ရှိကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ် VPN ဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ပြီးတက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုပြင်ရန် (သို့) ချိတ်ဆက်ရန်ဘာမှမလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။
ExpressVPN နှင့်အတူ 30 ရက်အခမဲ့ရယူပါ
ထုတ်ဖော် - ကျွန်ုပ်သည်လက်မှတ်ထိုးသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ExpressVPN ရက် ၃၀ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Tags: ExpressVPNနေခြည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းvirtual private networkVPNဘာဖြစ်သလဲvpn ဆိုတာဘာလဲ